Hilib iyo Timir! Maxaabiista oo soo dhaweeyay bisha Ramadaan | ICRC da Soomaaliya
Hilib iyo Timir! Maxaabiista oo soo dhaweeyay bisha Ramadaan
14/04/2021 , Maqaallo
Isugeyn 240 neef oo ari ah ayaa loo qeybiyay labada xabsi ee Hargeysa iyo Mandheera. © ICRC/ Mustafa Saeed
Maxaabiista ku xiran xabsiyada Hargeysa iyo Mandheera ayaa awood u heli doona in ay bisha barakeysan ee Ramadaan ku maamuusaan liis ka kooban walxo kala duwan. Mid ka kooban timir, oo dhaqan u ah dadka muslimiinta ah ee sooman, iyo hilib ari. Kuwani waxa ay qeyb ka yihiin raashin ay u qeybisay Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) xarumaha oo ay ugu talo gashay maxaabiista si ay ugala qeyb qaataan bulshada kale ee muslimka ah xuska munaasabadan. Waxyaabaha kale ee loo qeybiyay labada xabsi waxaa ka mid ah misir, saliid, caleenta shaaha, caano iyo sonkor.
“Ma ahan wax maalin kasta lagu arko 100 neef oo ari ah xabsiga dhexdiisa. Xamaasad gaar ah ayaa ka muuqata maxaabiista iyo madaxda xabsiga ramadaanka sanadkan.” Sidaa waxaa yiri Yuusuf Carte, oo ah madaxa xafiiska ICRC-da ee Hargeysa.
Shaqaalaha ICRC-da oo kormeeraya wareejinta alaabta Xabsiga Dhexe ee Hargeysa. © ICRC/ Mustafa Saeed
ICRC-da ayaa booqata xabsiyada iyo goobaha kale dadka lagu hayo ee dowladaha Adduunka oo dhan si dadka xorriyadda laga qaaday ay u helaan la dhaqan bani’aadamnimo iyo Sharaf ay ku dheehantahay. Booqashooyinka ayaa ah qeyb taariikhi ah oo ka mid ah howsha ICRC-da waxa ayna soo bilawdeen dagaalkii 1aad ee Adduunka halkaas oo la booqday xeryaha maxaabiista lagu hayo si xaaladdooda nololeed loo hagaajiyo.
“Ramadaanka ayaa aad muhiim ugu ah muslimiinta oo dhan fursad ayeyna noo tahay dhammaanteen si aan xasuusano in uu sidoo kale maxaabiistana muhiim u yahay,” sidaa waxaa tiri Anike Doherty, oo ah isu-duwaha Dhowrista ee ICRC. “Waxa aan rajeneynaa in tallaabadani ka caawin doonto in ay Sharaf ku soomaan.”
Kani waa Ramadaankii 2aad ee yimaada iyada oo uu jiro caabuqa Covid-19 iyada oo ka ilaalinta caabuqan ee xabsiyada ay qeyb weyn ka tahay dadaallada ay waddo ICRC. Dhowr meelood oo gacmaha lagu dhaqdo ayaa laga sameeyay xarumaha xabsiyada iyada oo sidoo kalena maxaabiista iyo shaqaalaha loo sheegay tallaabooyinka ay tahay in ay qaadaan si ay uga hor tagaaan faafitaanka cudurka.
Iyada oo ay jirto xayiraadaha safarka ee uu keenay cudurku, ayaa kooxaha ICRC-du booqdeen Xabsiga Dhexe ee Hargeysa iyo xabsiga mandheera labadaba intii u dhexeysay Janaayo iyo Maarso ee sanadkan.
© ICRC/ Mustafa Saeed
Xabsi kasta ayaa helay 3,500kg oo timir ah. In timirta lagu afuro ayaa ah dhaqan sal ku leh sunnaha Nabi Muxammad (SCW) waana sababta ay timirtu u tahay qeyb muhiim ka ah miiska afurka. © ICRC/ Mustafa Saeed.
Maxaabiista xabsiga Hargeysa oo gacan ka geysanaya dajinta cuntada. Marka laga reebo ariga iyo timirta, alaabta kale ee loo qeybiyay xabsiyada waxaa ka mid ah misir, saliid, caleenta shaaha, caano, basbaas iyo yaanyo shii-shiid. © ICRC/ Mustafa Saeed
ICRC-da ayaa la shaqeyneysay mas’uuliyiinta labada xabsi si loo hubiyo in tallaabooyinka ka hortagga ah sida meelaha gacmaha lagu dhaqdo, la diyaariyo. © ICRC/ Mustafa Saeed
Kooxaha ICRC-da ayaa booqda xabsiyada iyo meelaha kale ee dadka lagu hayo ee dowladaha Adduunka oo dhan si dadka xorriyadda laga qaaday ay u helaan la dhaqan bani’aadamnimo iyo Sharaf ay ku dheehantahay. © ICRC/ Mustafa Saeed